सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म टिक्दैन : बाबुराम भट्टराई « Nagarik Khabar
प्रकाशित मिति : 14 September, 2021 12:43 pm
जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई राजनीतिक शक्ति र परिचर्चाको केन्द्रका पात्र हुन् । जनचोर्माबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका भट्टराई माओवादी, नयाँ शक्ति, संघीय समाजवादी हुँदै अहिले जसपामा छन् । कुनै समय थियो, उनलाई नेपाली राजनीतिका दूरदर्शी, पढेका, बुझेका नेता मान्नेको जमात बाक्लै थियो । तर, माओवादी त्यागेर दलबदलमा लागेपछि सर्वसाधारणले समेत भन्न थालेका छन्– ‘भट्टराईको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्‍यो । उनले अस्थिर राजनीति गरे ।’
जनमोर्चा, माओवादी, नयाँ शक्ति, संघीय समाजवादी हुँदै अहिले जसपामा हुनुहुन्छ । यति धेरै दलबदल किन ?
त्यहाँ विभिन्न टुक्रयाउने क्रममा विजातीय शक्तिहरू अर्थात् प्रतिगमन सोच राख्ने शक्ति हुन्छन् ती चाहिँ एक्लिन्छन् र अग्रगामी शक्तिहरू अगाडि बढ्छन् । त्यसैले यो टुक्रिएको, फुटेको भन्ने हैन, पार्टी सुदुढीकरण सबलीकरणको एउटा प्रक्रिया हो ।
तपाईं १० वर्ष शसस्त्र विद्रोहमा होमिनुभयो, अहिले विगतमा क्षेत्रीय राजनीति गरेका भनिएका दलसँग सहकार्यमा हुनुहुन्छ । त्यसवेलाका तपाईका एजेन्डा अब यस्ता पार्टीले बोक्ने बेला भएर हो कि तपाईले आफूलाई करेक्सन गर्नुभएको ?
होइन, जनयुद्धको एजेन्डा त सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर देशमा जनताले संविधान आफैँले बनाउने र पूँजीवादी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर समाजवादको बाटो निर्माण गर्ने चरणमा थियो । त्यो लक्ष्य हामीले पूरा गरिसक्यौँ । अब समाजवाद निर्माण पूरा गर्ने अर्को जिम्मेवारी आएको छ । त्यो भनेको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार तयार परे मात्र समाजवाद आउँछ । त्यसैले यो दोस्रो चरणको अभियान र पार्टी निर्माण हो ।
यतिबेला तपाईंहरूको सत्तापक्षीय गठबन्धन छ । दुई महिना बित्यो सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, यस्तो पाराले जनताका अपेक्षा कसरी र कहिले पूरा होलान् ?
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अलमल भइरहने हो भने संसद् पुनःस्थापनाको औचित्य पुष्टि होला र ?
औचित्य पुष्टि होइन, त्यो त पुनःस्थापना नभएको भए त व्यवस्था नै डिरेल हुन्थ्यो । चुनाव हुनेवाला त थिएन । कम्तिमा यो सरकारले चुनाव गराउँछ त्यो चाहिँ वैधानिक चुनाव हुन्छ र व्यवस्थाको रक्षा हुन्छ । त्यस अर्थमा पुरानो ओलीको प्रतिगमनकारी हर्कत र यसको तुलना गर्न मिल्दैन ।
प्रसंग बदलौँ । तपाईंले लामो समय संघर्ष गरेको माओवादीलाई प्रचण्डले पटकपटक विघटन गरिदिए हुन्छ भन्नुहुन्छ, के कारण रहेछ ?
माओवादी आन्दोलन सामन्ती, निरकुंशवादी राजतन्त्रको अन्त्य गरेर नेपालमा एउटा मौलिक ढंगले पूँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न निर्माण गरिएको पार्टी र प्रयोग गरिएको एउटा नीति कार्यक्रम थियो । अब त्यो संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको संविधान जारी भइसकेकोपछि त्यो कार्यभार पूरा भयो ।
हामी त्यो भन्दा अगाडि बढेर वैकल्पिक शक्ति निर्माणतिर जानुपर्थ्यो । त्यसमा प्रचण्डजी पुरानै ठाउँ टाँसिएर बस्नुभयो । पुरानै सोच र संगठनले काम नगरेपछि उहाँ बेलाबखतमा यसलाई विखण्ड गर्नुपर्‍यो भन्नुभएको छ, त्यो औचित्य सिद्धिसक्यो त हामीले पहिल्यै भनेकै हो । त्यसलाई मानेर उहाँ एउटा समाजवादी नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ जानु नै उपयुक्त हुन्छ ।
प्रचण्डले त बेलाबखत बाबुराम माओवादीमा नै फर्कनुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि, जानुहुन्छ ?
तपाईंले एकपटक गोरखा आएर भन्नुभा’थ्यो– बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा नौ अर्ब घोटला भएको छ । मसँग प्रमाण छ, आवश्यक परे सार्वजनिक गर्छु । तर, अहिलेसम्म गुपचुपमै राख्नुभा’छ, किन ?
बुढीगण्डकी परियोजना मेरै पालामा सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो । त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । कमिसनखोरहरूको चलखेल र अन्य राजनीति दलका नेताहरू त्यसबाट अनावश्यक प्रभावित रहेकाले यो ढिला हुन पुग्यो । अहिलेसम्म पनि त्यो अगाडि नबढ्नुमा आन्तरिक चलखेलकै मुख्य कारण हो, यो देशको हितमा छैन । बुढीगण्डकी परियोजना छिटो बन्नुपर्दछ भने म ठान्दछु ।
पछिल्लो बजेट हेर्दा तपाईको गृहजिल्ला गोरखामा बजेट अत्यन्तै न्यून छ । तपाईंले पहल नगर्नुभएको कि पहल गरे पनि नपाएको हो ?
सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म टिक्दैन